Manchester City Oo Guul Soo Laabasho Ah Ka Gaadhay PSG Xilli Labadooduba Usoo Gudbeen Wareegga 16ka - Laacib
HomeWararka Champions LeagueManchester City Oo Guul Soo Laabasho Ah Ka Gaadhay PSG Xilli Labadooduba Usoo Gudbeen Wareegga 16ka
Manchester City Oo Guul Soo Laabasho Ah Ka Gaadhay PSG Xilli Labadooduba Usoo Gudbeen Wareegga 16ka
Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa 2-1 ku garaacday PSG oo marti ugu ahayd Etihad Stadium, waxaanay labadooduba usoo gudbeen wareegga xiga ee 16ka.
Manchester City oo fursado badan dayacday ayaa guul soo laabasho ah kasoo hoysay PSG oo gool uu u dhaliyey Kylian Mbappe la hormartay bilowga qaybta labaad.
Raheem Sterling iyo Gabriel Jesus oo beddel ku yimid ayaa guusha u go’aamiyey Manchester City oo kasokow soo bixitaankeeda ka aargoosatay PSG oo kulankoodii hore ee Parc des Princes kaga soo badisay natiijadan oo kale.
Manchester City ayaa daqiiqaddii lixaad ku dhowaatay inay hoggaanka u qabato ciyaarta, kaddib markii uu Rodri madax ku qabtay kubbad halis ahayd, taas oo uu dhaafiyey goolhaye Navas,hase yeeshee Kimpembe oo garoolka dhex-taagnaa ayaa madax iskaga soo saaray. Riyad Mahrez oo ay u tagtay ayaa shabaqa dhinaca kaga dhuftay.
Pep Guardiola ayay kooxdiisu markiiba si fiican gacanta ugu dhigtay ciyaarta, waxaanay PSG kusoo ururiyeen difaacooda, iyagoo isku-dhiib iyo weerar inta badanka socday dhinaca bidix halis ku gelinayay goolka uu waardiyeynayay Keylor Navas.
Riyad Mahrez ayaa mar kale u dhowaaday goolka, kaddib markii uu dhinaca bidix kala soo galay kubbad uu usoo gooyey dhawr ciyaartoy oo PSG, kaddibna waxa uu ku toogtay goolka hase yeeshee Achraf Hakimi ayaa madax kaga saaray, gool caddaan ahna kabadbaadiyey kooxdiisa.
Raheem Sterling iyo Bernardo Silva ayaa laba fursadood khasaariyey daqiiqado aan kala fogeyn, ka hor intii aanu Ilkay Gundogan birta ku garaacin kubbad cajiib ahayd oo ay taageereyaashu usii kaceen iyagoo ka eegayey shabaqa dhexdeeda, hase yeeshee birta ayaa kasoo dafirtay goolkaas.
Qaybta hore ayay labada kooxood ku kala baxeen barbarro goolal la’aan ah oo Man City ay iska khasaarisay ugu yaraan laba gool oo aanu daah ka saarnayn.
PSG ayaa qaybtii dambe lasoo gashay dardar iyo iyadoo kasoo kabatay bandhiggii fadeexadda ahaa ee qaybta hore.
Shan daqiiqadood oo kaliya markii ay socotay qaybta labaad ayuu weeraryahanka reer France ee Kylian Mbappe hoggaanka u dhiibay PSG, kaddib markii ay Lionel Messi iyo Herrera kubbad isku-dhiib heersare ahaa sameeyeen, isla markaana uu laacibka reer Argentina dhinaca midig kasoo dhiibay kubad cajiib ahayd. Mbappe ayaa kubadda ka dhex-saaray lugaha Ederson, una sii dhaafiyey shabaqa.
Pep Guardiola ayaa beddel degdeg ah sameeyey, waxaanu saaray Zinchenko isaga oo keenay laacibka reer Brazil ee Gabriel Jesus oo sare usoo qaaday weerarka kooxdiisa ee dhalintu ka maqnayd.
Daqiiqaddii 63aad ayuu Raheem Sterling lugta bidix ku qabtay kubbad uu dhinaca midig kasoo qabtay Walker oo usii dhiibay Jesus oo hal taabasho iskugu sii dhaafiyey Sterling oo isaguna shabaqa ku hubsaday, waxaanay ciyaartu noqotay barbarro 1-1 ah.
Neymar ayaa fursad dahabi ah ka khasaariyey kooxdiisa, isaga oo goolka la hortegay kubbad uu difaacyahannada la dhaafay, hase yeeshee shabaqa ayuu dhinaca kaga dhuftay.
Fursaddan ay iska lumiyeen ayaa sabab u noqotay in Manchester City ay si dhab ah u xaqiijisato guul ay u qalmaysay.
GOOOOOOOAAAAALLLLLL!!!!! 2-1 City!!!!!!! Gabriel Jesus ayaa goolka guusha u dhaliyey Manchester City, isaga oo shabaqa ku hubsaday kubbad uu ka helay Bernardo Silva, taas oo uu dhulka ugu sii dhuftay Navas, shabaqiisana u dhaafiyey.
Manchester City ayay guushu ku raacday 2-1, hase yeeshee labada kooxoodba waxay usoo gudbeen wareegga 16ka, waxaase kaalinta koowaad fadhida Man City oo leh 12 dhibcood, halka PSG ay ka haysato 8 dhibcood.